အကျဉ်းသား ၄၅၂ ဦးအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြု
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > အကျဉ်းသား ၄၅၂ ဦးအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြု
အကျဉ်းသား ၄၅၂ ဦးအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြု	ခင်မျိုးသွယ်	| သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၀၀ နာရီ ၂၀ မိနစ်	ရန်ကုန် မဇ္ဈိမ ။ ။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အပါအဝင် အကျဉ်းသားများ အပါအဝင် ၄၅၂ ဦးအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ဝ (၁) အရ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်မှစ၍ ပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပြုကြောင်း သိရသည်။နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေး အတွက်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ မေတ္တာနှင့် စေတနာကို နားလည်ကြပြီး နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးတွင် တဖက်တလမ်းမှ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမည့် နိုင်ငံသားများအဖြစ်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေရန် လည်းကောင်း၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုကို အလေးပေးသောအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး၊ နိုင်ငံအချင်း အချင်း မိတ်ဝတ်မပျက် ဆက်ဆံရေးတို့ကို ရှေ့ရှုသောအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတောဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂ဝ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် အညီ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှ ပြစ်ဒဏ်များကို ထိုက်သင့်စွာကျခံပြီးကြသော အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများ၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများနှင့် နိုင်ငံခြားသား အကျဉ်းသားများအား ပြည်နှင့်ဒဏ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။“သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်က ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံရသူတွေအတွက် ဝမ်းသာကြိုဆိုရမှာပါ။ ခိုးမှု၊ လုယက်မှု၊ ခါးပိုက်နှိုက်စတဲ့ ဒုစရိုက်မှု့တွေနဲ့ ထောင်ကျတဲ့ သူတွေကျတော့ အပြင်ပြန်ရောက်လည်း နဂို သူတို့လျှောက်တဲ့လမ်းဟောင်းကို အလွယ်ပြန်လျှောက်ကြတာ များတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေ အပြင်ကို ပြန်ရောက်လာရင် လူထုအတွက် စိန်မငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ဖြစ်ကြရပါတယ်။ ဒုစရိုက်သမားတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးတာမျိုးဆိုရင် အတော်စီစစ်သင့်ပါတယ်” ဟု ရှေ့နေတဦးက ပြောကြားသည်။အဆိုပါ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ ၅ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ အနေဖြင့် ယခင်က အကျဉ်းသား ၂၈,ဝဝဝ ခန့်အား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ၄ ကြိမ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေထောင်လွတ်မြောက်မှု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်နိုင်ငံသား အများဆုံးပါဝင်	အကျဉ်းသား နှိပ်စက်သူများအား တရားစွဲရန်လိုသည်ဟု AAPP ဆို အင်းစိန်ထောင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၁ ဦးလွှတ်	၈၈ အများစု NGO လုပ်လိုသော်လည်း ဥပဒေက ကန့်သတ်ထားဟု ကိုကိုကြီးပြော	မွန်ပြည်သစ် နိုင်/ကျဉ်း နှစ်ဦး ပြန်လွှတ်ပေး	နိုင်/ကျဉ်း လွတ်မြောက်ရေး အမတ်သစ်များ မဆိုင်းမတွ ဆက်လုပ်မည်	ကျိုင်းတုံထောင် အကျဉ်းသားနှစ်ဦး စိတ်ကြွဆေးပြားများနှင့်ဖမ်းမိ	Who is Online
We have 116 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved